Mucaaradka: Waxay dawladdu lumisay suurtagal xilli wanaagsan ee dhaqaale - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga Moderaterna Elisabeth Svantesson oo shir jaraa'id kaga faallootay soo bandhiggii dawladda ee miisaaniyadda dhammeey-tirka ee guga. sawir: Jessica Gow/TT
Mucaaradka: Waxay dawladdu lumisay suurtagal xilli wanaagsan ee dhaqaale
La daabacay måndag 16 april 2018 kl 17.51
Xisbiyada mucaaradka ayaa dawladda ku andaceey inay lumisay suurtagal wanaag-san ee xilli uu dalku ku jirey koboc dhaqaale ee wanaag-san oo la sameeyn karey is-bedello wax ku ool ah.
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa dhammaan doonaya in la joojiyo miisaaniyaddan guga.
Xisbiga Moderaterna ayaa farta ku fiiqay in aanay jirin tiirar difaac ee ku filan kolka dhaqaaluhu galo xaalad liidata. Waxay sidoo kale farta ku fiiqeen kor u kaca dhibaatooyinka ka aloosan is dhex galka, dadyoowga suuqa shaqada dibadda ka jooga oo kor u sii kacaya, safafka loogu jiro dar-yeelka caafimaad oo iyaguna kor u sii kacaya, tirada ciidanka ammaanka oo yaraatay iyo ammaanka oo soo wiiqaya.
Xisbiga Moderaterna ayaa farta ku fiiqay in aanay jirin tiirar difaac ee ku filan kolka dhaqaaluhu galo xaalad liidata. Waxay sidoo kale farta ku fiiqeen kor u kaca dhibaatooyinka ka aloosan is dhex galka, dadyoowga suuqa shaqada dibadda ka jooga oo kor u sii kacaya, safafka loogu jiro dar-yeelka caafimaad oo iyaguna kor u sii kacaya, tirada ciidanka ammaanka oo yaraatay iyo ammaan-darrada oo kor u sii kacday.
-Dawladda wax walba dusha ka saari maayo, hase yeeshee masuuliyadda inaan howlaha loo kala dooran sida ay u kala muhiim-san yihiin oo aan wax looga qaban, sida ay sheegtay Elisabeth Svantesson, af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga Moderaterna oo ka hadlaysay dooddii miisaaniyadda ee ka dhacday xarunta baarlamanka ee Sweden.
Svantesson waxay farta ku fiiqday inay dawladdu kor u qaaday kharashkii dhaqaale gaaraya 100 bilyan oo koron, iyagoona sheegay in 3% oo ka mid ah ammaanka iyo kala dambeeynta.
Wasiirka dhaqaalaha Magdalena Andersson (S) ayaa isku difaacday inay dawladdeedu qabatay laba jibbaar in ka badan garabka midig kolkii ay dawladda hayeen.
"Waxaa la dayacay iskuulkii"
Xisbiga Liberalerna ayaa dawladda ku dhaleeceeyay in aanay miisaaniyadda guga muhiimad ku siin howlaha iskuullada maadaama ey kor u kaceen heer taariikhi ah dhallaanka aan ku guuleey-san dugsiyada hoose/dhexe.
-Waa miisaaniyad ay dawladdu ku dayacday iskuulka, sida uu sheegay af-hayeenka xisbiga Mats Persson (L).
Xisbiga Centern ayaa ku soo koobay siyaasaddii dawladda "afar sannadood oo dib u dhac ahaa".
-Waxaa la saarnaa hirkii xaaladda dhaqaale ee wanaag-san iyada oo aan laga faa’iideey-san, sida uu sheegay af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga Center-ka Emil Källström.
Siyaasadda dawladda ee is dhex galka ayaa ah mid lagu guul darreeystay, sida uu xisbiga Center-ku aamin-san yahay.
-Dhibaatooyinka ayaa ka sii adkaan doona sidii loo xalin lahaa kolkii la galo xaalad dhaqaale oo ka adag, sida uu sheegay Källström.
Xisbiga SD oo doonaya in dhammaan la joojiyo miisaaniyadda
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa doonaya isaga oo la kaashanaya xisbiyada garabka midig ee Alliansen in dhammaan la joojiyo miisaaniyadda guga ee dawladda.
-Waxaan ku dhiiri gelin lahaa garabka Alliansen inuu si dhab ah uga baaraan dego oo ay ku midoobaan. Cabsi gelintii in doorasho cusub la galo meesha waa ay ka baxday, marka wada jir waa waan u joojin karnaa miisaaniyadda guga ee dawladda, sida uu sheegay af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga SD Oscar Sjöstedt.